🥇 aza ajụjụ nke ndị ọrụ
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 183
Video nke ajụjụ nke ndị ọrụ
Nye iwu maka ịkọ ndị ọrụ
A gha agha nyocha maka ndị ọrụ na-enweghị enyemaka site na iji enyemaka nke ndị ọrụ anyị mepụtara mmemme USU Software system. Maka ịza ajụjụ site na ndị ọrụ, ị kwesịrị iji nlezianya mụọ ọtụtụ ọrụ dị na USU Software na-aza ajụjụ, na mmepe nyocha nke enyemaka nnwale ngosi ikpe anyị, nke bụ sistemụ nnwere onwe ma dịkwa mfe dịka ike ya. Na nyocha nke onye ọrụ ọ bụla, ọrụ ndị ọzọ nke usoro USU Software na-enye aka bara ụba, nke ndị ọrụ anyị na-eduga na-enyere aka ịgbakwunye na arịrịọ nke ndị ahịa. Uzo di iche iche di na uzo a na - enweta ga - enyere aka na mmepe oru nke usoro oru na iwebata akwukwo ndi di nkpa n’ime ngwanro. Ime ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ kwesịrị ịrụ ọrụ yana njikwa njikwa njikwa zuru oke gbasara ogo ọrụ yana ọsọ nke ịmepụta arụmọrụ. Za ajụjụ maka onye ọrụ dịpụrụ adịpụ, ụzọ kachasị mfe bụ itinye site na ọtụtụ ọrụ, ikike dị iche iche dị mkpa a ga-eji dịka e bu n'uche. Ndị na-ebu ozi na Telefon na-eleghara nkọwa ha anya nke ọma ma jiri ọtụtụ mmemme adịghị mma n’oge awa azụmahịa. Mana ọnọdụ dị n'ọrịa a, ọtụtụ ụlọ ọrụ enweghị ihe ọzọ ọ ga-eme ma ọ bụrụ na ịgbanwere ọrụ dịpụrụ adịpụ yana nkọwa zuru oke banyere akwụkwọ ndekọ aha ndị ọrụ dị. Dabere na usoro nhazi usoro, n'ime ọrụ, ajụjụ dị iche iche nwere ike ibilite, nke ịchọrọ ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ anyị maka enyemaka, ebe ndị ọkachamara anyị nwere ike inye ndụmọdụ oge. Onye enyemaka dị ịrịba ama na usoro ịmepụta akwụkwọ yana usoro nyocha usoro nyocha na nlekọta nwere ike inyere aka site na ụdị sọftụwia dị ugbu a, nke na-eme ngwa ngwa arụmọrụ niile dị mkpa. Remote-aza ajụjụ nke ndị ọrụ a chọrọ fọrọ nke nta niile ụlọ ọrụ na-gbanwere n'ime ime aza ajụjụ ebe ọ bụ na e nwere a dị ịrịba ama ọnụ ọgụgụ na-arụ ọrụ ike kpatara site ikenenke àgwà nke ndị ọrụ na ha kpọmkwem ọrụ ibu. Ihe ndị mere n’afọ gara aga ahapụghị ụlọ ọrụ ọ bụla n’ọnọdụ kwụsiri ike kama o mebiri ọnọdụ akụ na ụba nke ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị furu ọghọm, ọkachasị, ọghọm. Otutu ndi isi ahia di iche-iche di iche iche chigharia na ulo oru anyi ime ka ha di ike nke oma, nke USU Software na emeputa usoro ihe omume emeela nke oma, onu ogugu na ahia ahia ebiliwo. Ọ dị mma ịsị na ị webatara ụlọ ọrụ gị ntụkwasị obi a tụkwasịrị obi na ntụkwasị obi maka ajụjụ ọ bụla na usoro nyocha ọrụ yana arụmọrụ kachasị na usoro nke usoro mmemme USU Software. Site n'enyemaka nke teknụzụ dijitalụ nke oge a, ị nwere ike ijikwa oge gị na njikwa gị nke ọma na-achịkwa ndị ọrụ gị na ndị ọrụ gị na-eduzi ego. Usoro ahụ na-enyocha ọrụ nke ọrụ ọrụ na-akpaghị aka site na mmalite nke ụbọchị ọrụ site na ịwụnye sensọ onyunyo nwa oge. Ihe omuma anatara ozugbo maka nhazi na nkwenye na njikwa nke ụlọ ọrụ ahụ, yana ndị ọrụ na ngalaba na-ahụ maka njikwa maka oge ejiri ụgwọ na ịkwụ ụgwọ ọzọ. Emepụtara ịkọ akụkọ maka ịchọta ndị ahịa na ụdị eserese ọ bụla, ọ nwere ike ịbụ eserese, eserese, tebụl, histogram. N'iburu n'uche ọnọdụ kachasị ọhụrụ, anyị nwere ike ikwu ozugbo na ọchịchọ maka sọftụwia ndị a amụbaala nke ukwuu, si otú a na-enwe ndị ahịa ya oge niile, USU Software base natara ọtụtụ nyocha dị mma yana aha guzobere nke ọma. Ndebanye aha nke ndị ọrụ dị iche iche bụ ihe dị mkpa maka nduzi, nke nwere ike ịmata ndị ọrụ nwere omume nleghara anya maka ọrụ ọrụ ha wee sị ha nọrọ nke ọma ebe ọ bụ na enweghị ike ịgbanwe onye ahụ. Ihe ntọala USU Software, kemgbe mmalite ya, agafeela nyocha ọ bụla na anyị nwere ike igosipụta na ọ karịrị ikike karịa sọftụwia ndị ọzọ site n'inweta, n'otu ogo ma ọ bụ ọzọ, ihe akaebe nke eziokwu nke ntụpọ. Ọ bụrụ na anyị jiri usoro nyocha nke USU Software usoro ihe ndekọ data ndị ọzọ, ị nwere ike ịghọta ekele maka arụmọrụ ọrụ dị mfe ma na-enweghị nghọta nke ngwanrọ ahụ nwere, yana ikike ịmụ otu esi arụ ọrụ nke aka gị. Usoro nyocha kachasị adaba site na atụmanya nke ilele ihu ọrụ nke onye ọrụ, yana ikike ijikọ na kọmpụta ọrụ ya wee nata data n'ụdị snapshots maka oge ọ bụla nke ọrụ. Tupu ịmalite ile ndị ọrụ anya, ndị isi ụlọ ọrụ kwesịrị ịgwa ndị ọrụ nke oge a ka iwelie arụpụta ọrụ ma belata izu ike. Na usoro ọrụ dị iche iche, ịnwere ike iji akwụkwọ izizi ọ bụla wee mụọ ndepụta nke akwụkwọ akụkọ nke ntọala USU Software. Site n'inweta otutu njikwa na ikike ịza ajụjụ, ị gaghị ekwe ka ndị ọrụ nata ụgwọ ọrụ ha ngwa ngwa, onye ọ bụla ga-enwerịrị oge, iji rụọ ọrụ ọrụ ha. Kemgbe, n'oge nsogbu ahụ, obere azụmaahịa na obere ọkara ata ahụhụ nke ukwuu, ọ dịghị mkpa ikwu maka izu ike nke ndị ọrụ, ndị nwere ike imebi ọnọdụ akụ na ụba siri ike nke ụlọ ọrụ. Naanị ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-agbanwe usoro dịpụrụ adịpụ maka iduzi ọrụ ọrụ, ndị ọrụ nke ụdị mmepụta na-aga n'ihu n'ọrụ ha na ụlọ ahịa ahụ, dịka ọ dị na mbụ. A na-ekwusi ike na ụzọ a si enyere ọnọdụ siri ike aka, nke a ga-emerịrị site na mfu ole na ole dị ka o kwere mee maka akụ na ụba na ụlọ ọrụ. Remga nke ọma na-enyere aka ịhazi asọmpi na ịba uru nke ụlọ ọrụ ahụ ma belata mmefu na mmefu dị iche iche. Ndị ọrụ na-enwe ike ịgbakọ ebe dị anya na ndepụta nke ndị ọrụ site na itinye ozi na ngụkọta nke ụgwọ ọrụ, dị ka kaadị akụkọ pụrụ iche nwere akara nke awa a na-arụ kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na enwere ụlọ ọrụ netwọkụ, mgbe ahụ a na-enyocha ya nke ọma, na-enye ọnụọgụ ndị ọrụ na-akparaghị ókè ikike ịrụ ọrụ nke ọma. Ndị ọrụ nwere ike ịmịkọta ibe ha nke ọma site na iji usoro dị iche iche iji lelee ozi nke onye ọzọ mechara na ọnọdụ ikiri. Nwere ike n’onwe gị ịgbanwe ntọala nke agwa mmadụ maka ọtụtụ ọrụ gị na-arụ ọrụ na nchekwa data nchekwa data nke USU. Companlọ ọrụ nke nha ọ bụla nwere ike ịzụta mmemme sistemụ USU, nke ezubere maka ndị ahịa niile, n'agbanyeghị ogo nke mmepụta ha. Nhazi doro anya ma dị mfe nke USU Software database bụ uru dị mkpa nke ụlọ ọrụ ahụ, na njikọ nke ị nwere ike rụọ ọrụ nke ọma nke njikwa ụlọ ọrụ wee zipụ ha maka nkwenye site na e-mail. N'inweta usoro ihe omume USU Software n'oge oge nsogbu, ọ ga-ekwe omume iji rụọ ọrụ nke ọma ma debe ndekọ nke ndị ọrụ n'ụzọ dị anya n'oge ọrụ ha.
Usoro mmemme na-eji nwayọọ nwayọọ amalite ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ego yana usoro dị mkpa iji dejupụta akwụkwọ ntụaka. Maka ụgwọ ụgwọ dị ugbu a, ịmalitere ịmepụta akwụkwọ na ntọala maka mbinye aka nke otu abụọ ahụ. A ga-enyocha ụbọchị ọrụ nke onye ọrụ ọ bụla site na awa ole arụ ọrụ na ngwanrọ ahụ. Ndị isi ụlọ ọrụ ahụ, yana ndị ahịa na ndị na - ebubata ya nwere ike ịnata akwụkwọ ọ bụla achọrọ.
Ọtụtụ nchịkọta maka ụtụ isi zuru ezu na nchekwa data ma zigara ya na saịtị pụrụ iche.
Nwere ike ịmepụta ngụkọta oge maka ngụkọta ego maka ụgwọ ọrụ ụgwọ na sọftụwia ahụ na ebubo ndị ọzọ. Na-amalite usoro nke mbubata ozi na nchekwa data ọhụrụ iji malite ịmalite ịrụ ọrụ na ozi natara. Ikwesiri igwa ndi oru gi ego oru ha n’eme, site n’ile ndi nlele nke ndi oru nile di. Ndị ọrụ nwere ike iwepụta data na usoro akụ na ụma banyere ebumnuche na-abụghị ego ọsọ ọsọ na ịrụ ọrụ nke ọma na ngwanrọ.
A na-emezi ntụgharị ego dịpụrụ adịpụ na nchekwa data yana ntinye data n'ime akwụkwọ ego maka mmefu na nnata. N'ime usoro ihe omume ahụ, ndị ọrụ nwere ike ịmepụta ngwa ahịa site na iji akụrụngwa akara koodu ọgbara ọhụrụ. Ọ na-apụta na ngwanrọ iji wepụta usoro dị iche iche maka ọrụ nwere ike inye nkọwa zuru ezu nke ihe na-eme. Ihe ngosi ndị ahụ na-eweta oge na arụmọrụ nke ndị ọrụ site na usoro ntụnyere na usoro agụmakwụkwọ na-arụ ọrụ na ngwanrọ.
Trialdị usoro ngosi nke usoro ihe omume ahụ na-emetụta ọchịchọ onye ahịa ịzụta isi isi. Nwere ike ịwụnye mmemme mkpanaka na nkeji ole na ole na ekwentị, nke na-enyere aka ịchịkwa ndị ọrụ mgbe ha na-apụ n'ọfịs. Ọ na-apụta n'ọnụ ụzọ ụlọ iji wụnye akụrụngwa maka njirimara ọdịdị, nke na-enyere aka ịgbakọ data nkeonwe site na ngwanrọ ahụ.
Maka ngwa ngwa nke ngwa ngwa, o zuru ezu iji italics na injin ọchụchọ ma pịnye data aha ya niile. Tupu ịmalite ọrụ na ngwanrọ ahụ, ịkwesịrị ịgafe aha ngwa ngwa, nke na-enye ozi na nbanye na paswọọdụ maka ndị ọrụ.
A na-egosipụta nkwekọrịta ọ bụla yana akụkụ ego na-akpaghị aka na ngwanrọ na usoro mmegharị.
Ndị ọrụ nwere ike iji tebụl nduzi dị iche iche chịkwaa ma duzie usoro nyocha. Site na iji ozi atụmatụ, ị nwere ike iji ozi ndị ahịa ma debe ndekọ nke ndị ọrụ nke ọma. A na-ahazi ọkpụkpọ akpaka a chọrọ n'ụzọ ọ ga-egosi n'aha ụlọ ọrụ na-ebubata ngwaahịa ma na-eduzi ọnọdụ dịpụrụ adịpụ. N'ime usoro njikwa akwụkwọ, ị nwere ozi dị mkpa, nke ị na-ebufe site na usoro mbubata na ebe nchekwa ahọrọ. Ihe omume na usoro nke ime ihe ngosi na-egosi onu ogugu banyere oru ndi oru were aru. N'inwe interface dị mfe ma dị mfe na nchekwa data, ị nwere ike ịchọpụta ya n'onwe gị ma ghara ịgụnye ndị ọkachamara n'èzí. Site na nguzobe nke akuko puru iche na mmemme a, i nwere ike ijikwa ndi ahia ndi n’emezughi nyefe uzo. Have nwere ikike ijikwa ọmụma banyere steeti ụlọ nkwakọba ihe, ọnụọgụ nke ngagharị nke ngwongwo, ngwongwo na akụrụngwa.